Akhri khudbadii madaxweynaha Soomaaliya u jeediyey baarlamaanka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Akhri khudbadii madaxweynaha Soomaaliya u jeediyey baarlamaanka
Muqdisho – Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa manta khudbad u jeediyey baarlamaanka Soomaaliya, waxeyna khudbadiisu u qorneyd sidan:-
Xubnaha Golaha Wasiirada,
Xubnaha Golaha Shacabka,
Dhamaan Dadweynaha Soomaaliyeed,
Assalaamu Calaykum Waraxmatullaahi Wabarakaatuhu.
Waxaa farxad ii ah inaan maanta halkan ku kulanno, innagoo ay inagu soo dhawdahay munaasabadahii xorriyadda iyo midnimada dalkeenna. Sidoo kale waxaa bilo yar inaga xigaan inay soo xiranto muddada labada sano ahayd ee yagleelidda dawladeenna cusub. Waxaan jeclahay inaan si dhab ah idiin kala hadlo xalaadda dhabta ah ee aan maanta marayno iyo meesha aan hiigsanayno. Ma jecli inaan ka hadlo waxii la soo maray amaba dood ka galo sida ay wax u dhaceen.
Xaaladda dalkeenna waxaa is garab socdo laba muuqaal oo aad isaga soo horjeeda oo inooga baahan inaan labadaba wada aragno:
Waa soo noqoshada dawladnimada Soomaaliyeed oo maanta leh muuqaal ka duwan sidaynu ahayn sanado yar ka hor. Wax badan oo taladeenna kamid ah inaga ayay gacanta inoogu jirtaa. Aad bay u soo koob mayaan khilaafaadka dadkeenna ka dhaxeeyo. Waxaa xusid mudan inay maanta socdaan wadahadallo lagu doonayo soo celinta midnimadii Soomaaliyeed, isbeddelada siyaasadeed ee sida nabad gelyada leh uga dhacay deegaannada Puntland, dadaallada ka socdo maamul dhisidda iyo dib u hanashada gobollo kala duwan oo koofurta dalka ka mid ah. Waxaa isku aragti laga wada noqday mawqifka nabad-diidka ee doonaya in dalku dawlad la’aan noqdo. Waxaa dadkeennu isla wada gartay in dalkeennu aan innaga leenahay, inuu innaga ina wada sugayo. Daliilka ugu fududna waa kumannaanka qurbo joogta ah ee ka soo tagay noloshii raaxada lahayd ee ay ku haysteen dhulalka shisheeye iyo kumaananka qaxootiga ah ee ka soo noqonaya dalalka deriska ah oo waliba dib u soo dagayo goboladda iyo deegaanada kala duwan oo meelaha qaar ay ka jiraan duruufo nololeed oo adag. Waxaan jeclahay inaan sheego in dibudhiska dalkeenna ka socdo maanta ay tahay wax ay dadka Soomaaliyeed qabsanayaan, in yar oo taageero ah ayaa inaga soo gaarta dunida kale. Waxaannu ka soo gudubnay marxaladii aan dadka u sheegi jirnay in baahi badan loo qabo jiritaanka dawladnimada, waxaan ku jirnaa marxaladii dhismaha kalsoonida dadkeenna ku qabaan nidaamka dawladeed. Maanta waxa dadka Soomaaliyeed oo aad adinka madaxda u tihiin ka hadlayaan waa siday u wanaagsanaan lahayd dawladnimadeenna, ma arag cid aaminsan in aan iska duminno waxa aan haysanno. Waxaa maanta loo tartamayaa shaqada dawladda oo marar hore laga carari jiray, waxaannu leenahay ciidan qaran iyo hay’ado dawladeed. Shalay oo ugu dambaysay waxaan waraaqahii aqoonsiga ka guddoomay Safiirka Kanada oo ah safiirkii 48 ee aan aqoonsanno 20kii bilood ee la soo dhaafay.
Wali dalkeennu waxuu ku jiraa kaalinta ugu hooseeysa ee dalalka adduunka dhinaca amniga, dhaqaalaha, kobaca bani’aadanka iyo degenaanshaha siyaasadeed. Waxaa wali na haysata diifta dagaalladii sokeeye, falalka argagxisada oo muuqaal xun ka bixinaya dalkeenna iyo dadkeenaba. Waxaa nalagu magacaabaa qaxooti, argagixiso, burcadbadeed, tahriibayaal, ma shaqaystayaal cayr ah iyo waxyaabo la mid ah. Waxaannu culays ku noqonay beesha caalamka oo ay ka mid yihiin dalalka dariskeenna ah, waxanna tusaale u noqonay Ummad aan hanan karin nafteeda iskaba daa inaan ka faaidaysanno khayraadka Ilaahay nagu mannaystay.Waxaa wali qaarkeen ku weyn xusuusta wixii la soo dhaafay, oo mar mar u ekaanaya inay xiiso u qabaan maalmo murugo lahaa oo aan ka soo gudubnay. Shaki wayn baan kala qabnaa, bulshadana ka qabtaa in wixii hore wax la mid ah dhacaan, taasina waxay keenaysaa in caalamkuna naga shakiyo, hadaan innaga is aamini waynana cid kale nama aaminayso.
Waxaan isweydiiyaa labadaas muuqaal keebaa mudan inaynu xoojinno, mid waa inaynu dib eegno misna gadaal u noqonno, midka kalena waa inaynu hore u soconno, adkaysanno isla markaana illowno iskana cafino wixii xanuunka lahaa ee ina soo maray.
Dadkeenna maanta waxaa talada ku wada jira seddex jiil oo hadda hortayda ka muuqda, oo waalid isu noqon kara. Kuwii hana qaaday maalinkaan xorriyadda qaadannay, oo ay ku wayn tahay qiirada wadaninimada, midnimda dalka, nacaybka faragelinta shisheeye iwm, sidoo kale jiil soo maray dagaaladii sokeeye, tabasho badan ka qaba habka iyo nidaamka dawldnimo, shaki ka qabo wax kasta, aaminsan in la khiyaanayo iyo jiil dhallinyaro ah oo ah kan ugu badan dadkeenna tiro ahaan. Kuwaasi waa kuwa xaqa u leh inay inaga dhaxlaan dawlad ku dhisan sharci iyo kala dambayn, dal la tartami kara deriska iyo caalamka, kuna naalloon kara nolol karaamo leh, kuwaa ayaana ah inaan u danqanno, tallaabo kasta oo siyaasadeed oo aan qadayno maanta waa inaynu isweydiinnaa saameeynta ay kuwaas ku yeelan doonto.
Waxaan doonayaa inaan caddeeyo arrimaha soo socdo:
1-Dawladnimadeenna maanta kuma dhisno xisbi aqlabiyad haysta oo talada ku adkaaday, jabhad xoog dalka ku qabsatay, sidoo kale ma nihin madax ajnabi keensaday. Dibudhiska dawladnimadeenna wuxuu ku yimid fool culus oo waliba inagu dheeraatay burburkii ka dib. Waxaan dhamaanteen ku nimid is afgarad ku salysan qaab beeleed annagoo og in xataa beelaheennu aanay lahayn qaab nidaamsan oo aan isku matalno. Waxaan haysanno waa wixii garaadkeenna iyo awooddeenu ina gaarsiisay. Waxaan jeclahay inaan caddeeyo in dastuurka KMG ah ee aan ku dhaqanno uu aniga iga horeeyay oo aanan wax talo ah maalinna ku yeelan siduu u samaysan yahay, sidoo kale waxaan ahaa xildhibaan aad isku mar soo gasheen golahaan barlamaanka. Anigana waxaan ku imid doorasho aad aqlabiyadda codkiina igu siiseen idinkoo xor ah, fursadna u haysta inaad doorataan qofkii aad doontaan. Waxaa taas ka dambeeyay waa inaan soo xulay Raiisal wasaare aad idinku cod aqlabiyad ah ku ansaxiseen, sidoo kale xukuumadiisana aqlabiyad ku ansaxiseen. Waadna wada ogtihiin inaanay ahayn dad aniga xigtonimo iyo saaxiibtinimo gaar ah aan ku keenay, waxaad ogtihiin sida talo wadaaga ah ee aad uga qeyb gasheen dhismaha xukuumadda, xulidda wasiirada iyo ansaxinta barnaamijkeeda, iyadoo boqolkiiba lixdan (60%) golaha wasiiraddu ay yihiin xubno ka tirsan Baarlamaankan. Waxaan rabaa inaan diyaar u ahaanno inaan masuuliyadda wada yeelanno oo aanan la isku tuur-tuurin.
2-Maalmo dhawayd saaxiibbo badan oo golahan ka tirsan ayaa ii soo jeediyay eedayn ku qotanta 14 qodob oo ku dhamaanaysay in la fashilmay, madaxweynahuna masuul ka yahay. Waxaan waqti badan ku bixinnay inaan is-faham, wada hadal iyo isu garawsho wax ku xallino. Way ku mahadsan yihiin saaxiibadii soo jeedintaa iska lahaa, anna waxaan ku faraxsanahay inaan maanta inagoon dagaalamayn walina is jecel aan si xor ah wax isugu sheegi karno. Waxaan garwaaqsaday in soo jeedintaas ay ku salaysan tahay cabsi laga qabo inuu hirgeli waayo isbeddel dhab ah oo suurta gelin kara in la gaaro xasilooni, dawlad wanaag iyo doorashooyin sannadka 2016. Anigana anoo garwaaqsanayo cabsiyahaas jiri kara waxaan gartay inaan masulliyadda cid kale dusha ka saarin oo aniga aan qaato.
3-Waxaan doonayaa inaan idiin caddeeyo in aan ku kalsoonahay xukuumadda uu masuul ka yahay Raiisalwasaaraha oo aan aniga kalsooni ku soo xulay idinkana aad taageerteen. Waxaan si cad marar badan u sheegay in isaga iyo golahiisa wasiiradda masuul ka yihiin fulinta howlaha xukuumadda. Xukuumadda oo uu hoggaaminayo Raiisalwasaaraha waxaan hortiinna mar kale ugu sheegayaa inay haystaan kalsoonidayda, xorna u yihiin fulinta barnaamijkooda, barlamaankuna xaq ugu leeyahay inuu la xisaabtamo, anigana sidoo kale inaan soo kordhin doono qaab lagula xisaabtamo waxqabadka xukuumadda.
4-Golaha shacabka oo ah cidda maanta matalaysa shacabka soomaaliyeed oo dhan, wuxuu leeyahay muhimado ku qoran dastuurka iyo kuwa kale oo ay ina tusayso waajibka naga saaran dawlad dhiska xilligan xasaasiga ah. Ansaxinta hindise sharciyeedyada, wacyigelinta bulshada, kaabidda hay’adaha xukuumadda iyo qurxinta muuqaalka dawladnimada. Waxaan ka xumahay inay sii kordhayso dareenka ay shacabku ka qabaan barlamaanka iyo muuqaalada soo if baxayay mudooyinkan dambe oo ah in barlamaanku noqday: gole aan shaqo qaban, kulamadiisa daahaan, saacado yar shaqeeya, wax soo saarkiisa yar yahay, marka uu howl u dhaqaaqayo amaba guntankiisa buuxana uu yahay markuu u taagan yahay dhaliisha iyo caqabadaynta howlaha xukuumadda. Waxaa nasiib darro ah in xildhibaannada qaar ay meeshii ay colaadaha, qabyaaladda, danaysiga iyo sumcad xumada bulshadeenna ku habsatay ay ka bogsiin lahaayen, inay iyaga ku sifoobaan waxyaabahaas. Waxaan rajaynayaa inaan iska laabno boggaas foosha xun, waqtiga yar ee aan haysannana uu ku baxo inaan dhamaystirno howlaha qabyada inoo ah iyo inaan soo celinno sumcadeenna iyo karaamada dadka aan matalno. Baarlamaanka waa hay’addii dalka u sarraysay, lehna awoodo dastuuri ah, shacabkuna kama garaysanayo inay iyagoo dadka iyo dalka masuul ka ah isagu diraan dhambaallo dhiillo ah qalabka warbaahinta, una dacwoodaan hay’ado ajnabi ah. Waa inaad aamintaan inaad dalka idinka leedihiin masuulna ka tihiin.
5-Haddaan u soo laabto dawr-kayga, waxaan doonayaa inaan idiin caddeeyo inuu yahay inaan dalkan ku hoggaamiyo wixii aan u dhaartay ee ahaa danta dadka, dalka iyo diinta, taasi oo ay ka mid tahay ilaalinta qarannimadiisa madaxbanaanidiisa, midnimadiisa iyo wadajirka dadkiisa. Waxaan ballan qaadayaa inaan si hagar la’aan ah uga shaqeeyo inuu dalkan mudada inoo hartay ku gaaro dastuur ilaalinaya wadajirkiisa, midnimadiisa iyo madaxbaanidiisa, inaan u taagnaado ilaalinta hantida qaranka iyo soo celinta karaamada muwaadinka iyo in 2016 ay ka dhacaan doorashooyin. Si ay u suurto gasho isla xisaabtan dhab ah oo aan aniguba diyaar u ahay, waxaan jeclahay in qaarkiin aysan iska dhaadhacsiinin in madaxweynihii aad doorateen uusan lahaanin wax awood ah, oo mar dastuurkeenna qabyada ah lagu gacmo xiro, marna dhaqankeenna siyaasadeed ee qabiilka iyo danaysiga shaqsiyeed ku dhisan lagu lugo xiro , marna doodaha xubnaha iyo dacaayadahooda loogu gooddiyo, marka aan ka nasiib darannahayna waa marka aynu ajnabi u kala dacwoonno si gacmaha iyo lugahaba la inooga xiro.
6-Waxaa muhiim ah inaynu isla garanno xaaladda aan ku sugannahay, ma jirto xog isku keen seeggan, awoodda dawlada ay leedahay, dhaqaalaha soo gala, xiriirkeeda caalamiga iyo kartideedaba.Sidaa darteed ma filayo inay jirto cid inaga mid ah oo aaminsan in dibudhiska dawladnimada ay fududahay inagoo soo marnay bur burkaa xoogga leh oo dhinac kasta ah, waxaan doonayna oo dhanna kuma hirgali karaan awoodda yar ee aan leenahay iyo muddada gaaban ee aan isla joogno. Waxaa la innaga doonayaa inaan xoogga saarno, mudnaantana siinno sida ay howlaha ugu kala muhimsan yihiin gaarista Hiigsiga 2016, xaaladdan ku wajahno midnimo, is qaddarin iyo masuuliyad wadareed.
7-Waxaan naftayda iyo tiinaba ku dardaarminayaa in aan u wada is taagno in aan gaarno meesha umadda Soomaaliyeed ay inaga filayso in aan waddanka gaarsiinno, sidoo kale, in aan dawlad wanaag tusaale wanaagsan ah aan muujinno oo xusuus ku reebta shacabka Soomaaliyeed. Maanta waxaan haysannaa fursadii aan Soomaaliya ugu samayn lahayn taariikh wanaagsan oo beddesha maalmaheennii madoobaa. Sidoo kale qof kasta oo inaga mid ah taariikhdaas ayuu wax ka samaynayaa, waa inuu qof kasta maanta doortaa sida uu jecel yahay inay taariikhda u xusto.
Gabagabadii waxaa xusid mudan in wada shaqaynta iyo midnimada hay’adaha dawladdu ay muhiim u tahay in la laba-laabo waxqabadka shacabku inaga dhoowrayaan.
Aad iyo aad ayaad u Mahadsantihiin
Ethiopia :Shocking Sexual Violence Against Women in Ogaden